उपत्यकाबाट खोप दिइने ११ अस्पतालहरु
डा.सागर राजभण्डारी र डा. अनुप बाँस्तोला
माघ १३, २०७७ ०७:३३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको शुभारम्भ टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालबाट हुने भएको छ । बुधबार (भोली) १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल मार्फत उक्त अस्पतालबाट अभियानको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी र दोस्रो खोप पहिलो कोरोना संक्रमितदेखि अहिलेसम्म कोरोनाका बिरामी हेरिरहनु भएका अस्पतालका प्रमुख कन्सलटेन्ट डा. अनुप बाँस्तोलाले लगाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
चीनको युहानबाट आउनुभएका जनकपुरका एक युवा शंकास्पद लक्षण लिएर २०२०, जनवरीका १३ दिन टेकु अस्पतालमा भर्ना हुन आउनु भएको थियो ।
डा. बाँस्तोलाको टिमले एक–दुई दिन उहाँलाई पञ्जा, मास्कबिना नै उपचार गर्‍यो । लक्षण मिलेको र संक्रमण फैलिएको स्थानबाट आएकाले उहाँलाई शंकाको घेरामा राखेर स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि हङकङ पठाइएको थियो । २३ जनवरी अर्थात् पुस २९ गते आएको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको डा. बाँस्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।
पुस २९ गते नेपालमा कोरोना भित्रिएपनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माघ ९ गते त्यसको जानकारी गराएको थियो । मन्त्रालयले पहिलो कोरोना संक्रमितबारे जानकारी गराउँदा संक्रमित भने उपचार गरि डिस्चार्ज हुनु भइसकेको थियो ।
सुरुमा कोरोना भित्रदा नेपालमा पीसीआर जाँच्न स्रोत र साधनसमेत थिएन भने अहिले देशभर ८० भन्दाबढी प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ । भोलि देशभरका ६२ अस्पताल र १२० वटा खोपकेन्द्रबाट एकैसाथ खोप अभियान सुरु हुनेछ ।
अभियान सुरु भएको एक हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भने ११ वटा प्रमुख अस्पतालबाट खोप लगाइनेछ । उपत्यकाबाट खोप दिइने ११ अस्पतालहरु :
८ गतेबाट निजी सवारीमा जोर-बिजोर, कपडादेखि मोबाइल पसलसम्म खुल्ने
‘लुज डाउन’ काे पहिलो दिनमै ट्राफिक जाम (फोटोफिचर)
आषाढ ०१, २०७८
'ज्येष्ठ नागरिकका लागि कोरोना खोप अनिवार्य शर्त हो'